Isu takaedza Danalock V3, iyo HomeKit inoenderana smart kukiya | IPhone nhau
Isu takaedza Danalock V3, smart kiyi inoenderana neKeanKit
Home automation inoramba ichipinda mumba medu nenzira isingamiswe, uye apo isiri nguva yadarika vamwe vakatofanoona kuti nekufamba kwenguva taizovhura madhoo eimba ne smartphone yedu, vashoma vakafungidzira kuti izvi zvichawanikwa kune chero munhu nekukurumidza. Icho chatove chokwadi chekuti tinogona kuzviita uye isu tamboedza iyo yekutanga HomeKit inoenderana smart smart iyo yatinogona kushandisa muEurope.
Danalock V3 ndiyo modhi yatinotova nayo uye kuti iwe unogona kuzviisa iwe mukiyi pamba. Yakabatanidzwa mupuratifomu yeApple nezvose zvingaitwe neKeKKit, tinokuratidza kuti yakaiswa sei uye kuti inoshanda sei. Kuvhura musuwo wemba nezwi rako kana wachi yako zvino zvinoita.
1 Kuisa kit
2 Kugadziriswa uye kushanda
3 HomeKit inovhura nyika yezvingaitika
Kuti ugone kuisa smart smart pamusuwo wako, unofanirwa kutenga kititi yakazara inosanganisira yeDanalock smart kiyi uye humburumbira iyo inoshandura yako yakajairika kukiya muDanalock inoenderana kukiya. Iwe unogona kutenga zvinhu zvakasiyana, kune kunyange anowirirana epamusoro ekuchengetedza masirinda, asi chinonyanya kukosha mune zvehupfumi kuzvitenga pamwechete.
Iyo Complete Kit ine iyo Danalock smart kukiya, iyo humburumbira uye akati wandei maadapter ayo anoshanda kugadzira silinda kureba kwakakodzera kuitira kuti zvese zvishande zvakakwana. Kune mhando zhinji dzemusuwo, saka zvakakosha kuti iwe uzive kuti iwe hauzove nerudzi rwechinetso nekuti zvese zvinosanganisirwa. Muvhidhiyo unogona kuona mashandisiro anoita maadapter aya mukuita kwegungano. Izvo hazvina kuoma, uye iwe unogona kugara uchienda kune iyo Danalock webhusaiti kuona sei-kumavhidhiyo. Chero ani ane maoko maviri anogona kuzviita uye maitiro anotora chete maminetsi mashanu.
Mubvunzo wakabvunzwa nevakawanda pandakavaudza nezvechivharo ndechekuti ungavhurwe sei pasina kupera mabhatiri kana kukiya. Ehe kiyi inoshandawo sekiki yakajairika nekiyi yayo, uye kana iwe uri mukati meimba iwe unogona kuvhura uchishandisa iwo manyore mashandiro. Kuchengetedzwa kwayo kwakanyanya kwazvo, uye pamusoro pekuti iwe unogona kutenga inoenderana yekuchengetedza masirinda, iyo Danalock system ine 256 AES kunyorera saka chengetedzo haisi dambudziko. Nenzira, sezvo takurukura kuti mabhatiri anogona kusakara ... usafunge kuti vachazviita mumwedzi, sekuvimbiswa kwechiratidzo kuzvimiririra kweanopfuura makore maviri kunyange kuvhura iyo kiyi kagumi pazuva.
Nyaya yemakiyi yakakosha. Danalock ine mhando mbiri dzesilinda, yayo, inosanganisira makiyi mashanu uye haugone kuwana mamwe makopi (unofanirwa kuodha imwe humburumbira), uye mamwe kubva kuGerda brand (inova yandinayo). Aya makiyi haakwanise kuteedzerwa chero kupi, iwe unogona chete kuodha makopi kubva kumugadziri pachawo (orders@igerda.com) pamutengo we € 15 iyo kopi uye € 5 mutengo wekutakura. Kuodha makopi iwe uchazoda kodhi iyo inosanganisirwa mune yekukiya kadhi.
Kugadziriswa uye kushanda
Kana kumisikidza kwapera tichava nekiyi yedu yakagadzirira kushanda. Chekutanga tichafanirwa kuita calibrate lock kuti igone kuziva nzira yekuita kana tichida kuvhura kana kuvhara. Kiyi yacho inokwanisa kuvhura chero musuwo, kunyangwe iwo ayo anowedzera kukiya ane slip, uye iwe unogona kusarudza kana iwe uchida kuti ndivhure zvachose kana kungovhura kuvhara uye wozovhura slide. Izvo zvese zvinoenderana nemabatiro aunoita kukiya iyo, chimwe chinhu chaunogona kuchinja chero nguva.
Kiyi yacho inoshanda kuburikidza neapp yako kana kuburikidza neiyo iOS Kumba app, watchos (uye macOS kubva munaGunyana). Kubatana kune edu zvishandiso kunoitwa kuburikidza neBluetooth. Kunyorera kwaDanalock kwakashata, uye zvakare hakubvumidze kuwana kure, saka kana kiyi yacho yagadziriswa uye ikaiswa mumidziyo yangu yeKeKKit, chokwadi ndechekuti handina kushandisa chikumbiro chako zvakare. Ehe, iwe unofanirwa kuishandisa kana paine firmware yekuvandudza yekiyi.
HomeKit inovhura nyika yezvingaitika
Ndicho chinoita kuti kiyi iyi inyanye kunakidza kupfuura iyo iwe yaunowana muzvitoro zvehardware. Iko kusanganisa pamwe neApple chikuva, pamusoro pekuvimbisa kuchengetedzeka kwesystem uye yakakwana kusangana pamwe neyako ese Apple zvigadzirwa, zvinokupa iwe kuwana kure, mukana wekupa mukana kune vamwe vashandisi vaunotendera, zviziviso pese painovharwa kana kuvharwa uye yakareba etcetera. Unogona kutarisa mwero webhatiri, chimwe chinhu chakakosha kana uchishanda nemabhatiri e123V CR3A, akajairika mumakamera.
Hatigone kukanganwa zvinonyanya kufadza: otomatiki. Iwe unogona kumisikidza kiyi yako kuti izarure uye uvhare pane dzimwe nguva, pasina kunetseka nekuvhara iyo iwe paunorara. Iwe unogona zvakare kugadzirisa kuti kana pasina munhu pamba kiyi inovhara otomatiki, kana pakuivhura mushure menguva yakati mwenje wepaseji unobatidza. Iyi ingori mimwe mienzaniso yezviitiko zvinopihwa neApple chikuva uye ichi Danalock kukiya.
Ehezve isu tinogona kushandisa yedu Apple Watch kuivhura, isu tinogona kunyange kushandisa Siri kuzviita. Kuti mubatsiri weApple avhure iyo loko, zvichave zvakakodzera kuti iyo iPhone ivhurwe, zvikasadaro, haizokwanisa kuvhura musuwo. Uye nePodPod chimwe chinhu chakafanana chinoitika: unogona kuvhara asi usingavhure. Mutauri weApple haana kuzivikanwa nenzwi, saka chero munhu anogona kukumbira kuvhura musuwo kubva munzira. Kuti uigadzirise Apple yatora nzira ipfupi: neiyo HomePod unogona kuvhara asi kwete kuvhura.
Nekugadzira uye mashandiro, iyo Danalock yekukiya iri pamusoro pechero imwe yakafanana yakafanana iyo yatinogona kuwana pamusika. Simba rayo rakakura kusangana pamwe neapuratifomu yeApple, HomeKit, iyo inoipa huwandu hwakawanda hwezviitiko maererano nekushandisa neApple zvishandiso pamwe nemichina inogona kugadziriswa. Maitiro ayo ekumisikidza ari nyore kana mirairo yemugadziri ikateedzerwa, uye hazvidiwe kuti utendeukire kune chero nyanzvi kuzviita. Yayo chete poindi yekuvandudza iko kunyorera kweIOS, chimwe chinhu chisina basa zvachose uchifunga kuti inobatwa zvakakwana kubva kuImba app pane edu zvishandiso. Iyo yakakwana kit iyo inosanganisira iyo yekukiya uye humburumbira inotemerwa pa € ​​248 paAmazonlink). Inowanikwa zvakare muApple Chitoro pamhepo (link) uye pawebhusaiti yake yaDanalock (link)
Dhizaini uye inogumisa
Easy manejimendi kubva kuIOS, watchOS uye macOS
Kubvira kutyaira naSiri
Rudimentary yemuno app
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Isu takaedza Danalock V3, smart kiyi inoenderana neKeanKit
Ndeapi machubhu anoenderana? Kunyanya iyo Tessa tk100 ndizvo here?
Kwete, iyoyo haienderane. Inofanirwa kuve modhi yakanyatsogadzirirwa Danalock senge iyi kubva kuKESO: https://en.robbshop.nl/security-cilinder-from-keso-for-the-danalock-inside-40mm-outside-45mm-3032
Ndakaverenga kuti inobatana kuburikidza nebluetooth kune iphone. Saka inosangana sei neHomekit pandinenge ndisiri pamba uye ndichida kuvhura imba iri kure?
Mhoroi, ndanga ndichifunga nezve kuzvitenga kwemazuva uye ndine kusahadzika kwakawanda. Chekutanga ndechekuti inogona kuvhurwa kure uye chechipiri, zvine ruzha here?
Ndine mubvunzo mushure mekuona vhidhiyo, ko 3 kana 5 kiyi dzakatanga kuiswa? Muvhidhiyo ndaingoona 3. Ndatenda
Ini ndinozviratidza muchinyorwa: kana iwe ukasarudza iyo Danalock cylinder, 5 unouya pasina mukana wekuteedzera. Kana iwe ukasarudza vamwe, 3 uya uye iwe unogona kukumbira mamwe makopi.
Ehe, inogona kuvhurwa kure NENGUVA UYE kana uine * iPad inoshanda seimba otomatiki nzvimbo. Nechikonzero ichocho ndakadzorera yangu ...
Iyo Danalock application inowoneka muvhidhiyo uye zvidzitiro zvinoonekwa muchinyorwa hazviite senge zvakafanana, kutaura zvazviri ini ndinowana iyo app sezviri muma screenshots asi handikwanise kuitora kuti ibude senge muvhidhiyo. Kutenda uye zvakanaka zvese.
Ini ndaida kuziva kana yakakodzera yekunze yekunze, kuti ndikwanise kuvhura yekupinda musuwo kune iyo plot (yevanofamba netsoka musuwo). Ini handisi kuwana iyi data chero kupi. Kana iri IP66 zvakanaka, asi ini handisi kuwana iyo IP degree
Apple inodzima basa rayo rekudhinda mifananidzo uye rinotikurudzira kushandisa masevhisi echitatu
Apple inogadziridza dhata reEurasia uye inosimbisa matatu maPhones matsva